ကာစီနိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Winward Casino ✅ ▷ အောက်တိုဘာလ 2021 | အပိုဆုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေယူရို 45
Winward Casino - အောက်တိုဘာလ 2021
Top-Tier Software ပံ့ပိုးသူများ;
Live Chat ကိုဖွင့်ပါ 24/7;
ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အချိန်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသည့် 72 နာရီ;
ငွေကြေးဖော်ခြင်း EUR, USD, AUD, GBP, CAD, ZAR
အများဆုံးဆုတ်ခွာ €40000 လစဉ်
တစ်နေ့လျှင် max ကိုပေးချေမှု €10000
min ။ ဆုတ်ခွာ €50
ငွေပေးချေမှုအချိန်3ရက်များ
ကနေအလုပ်စတင်ခဲ့သည် မှ 2008
ပိုင်ဆိုင်သူ Blacknote Entertainment Group Limited Casinos
Wager လိုအပ်ချက်များ - X25 (ကန့်သတ်ချက်များ)
အများဆုံးလောင်းကြေး: ယူရို 5
Winward ကာစီနိုပြန်လည်သုံးသပ်။ Winward ကာစီနိုသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ လောင်းကစားလုပ်ငန်း၌လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Winward ကာစီနိုပိုင်ရှင်သည် Engage Entertainment Group Inc ဖြစ်သည်။ Winward အကောင့်မှတ်ပုံတင်။
Winward Casino သေချာစွာဖတ်ကြည့်
Winward ကာစီနိုသည်လောင်းကစားလုပ်ငန်း၌ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အစကတည်းကဤလောင်းကစားရုံ၏ရူပါရုံသည်ကစားသမားများအားအွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးအတွက်အဆင့်မြင့်သောပလက်ဖောင်းကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသင့်တော်သောပရိုဂရမ်မာများအပ်နှင်းထားပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိသောကစားသမားလူတန်းစားများမှနေ့တိုင်းကြည့်ရှုသောထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာတကယ့်လောင်းကစားရုံမှာခံစားလို့ရတယ်၊ ဒီအတွက်သူတို့အိမ်ကနေထွက်စရာမလိုဘူး။
Winward ကာစီနိုပိုင်ရှင်မှာ Engage Entertainment Group Inc. ဤကုမ္ပဏီသည်Curaçaoရှိသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံအားလုံးမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကာစီနိုလောင်းကစားရုံရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကအရမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရမှာပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ရပ်ကဲ့သို့နောက်ခံသည်မှောင်မိုက်နေသည့်နေရာဖြစ်ပြီးဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်သည့်ကစားနည်းများ၏ရောင်စုံအိုင်ကွန်များနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလိုလိုသိသောမီနူးသည်ဘယ်ဘက်တွင်ရှိပြီးလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်ဂိမ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အောက်ခြေတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြန်မာဘာသာစကားဖြင့်မရနိုင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်နှင့်စပိန်ဘာသာတို့မှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဘာသာစကားကို "ဘာသာစကား" ကို နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောရွေးစရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Winward Polska မှာကစားချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ "Join ယခု" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်ပုံတင်ပုံစံသို့လွှဲပြောင်းပါလိမ့်မည်။ အမည်၊ surname၊ အကောင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်စသည့်အချက်အလက်များကိုပေးရပါမည်။ အကောင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးငွေကြေးရွေးပါ။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းသို့အတည်ပြုနံပါတ်ပေးလိမ့်မည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ပထမဆုံးငွေသွင်းနိုင်သည်။ Winward ကာစီနိုသည်ကစားသမားများအားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုပေးသည်။ ငွေပေးချေမှုကိုမှတဆင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်
Visa နှင့် MasterCard ငွေထုတ်ကတ်များ
Visa နှင့် MasterCard အကြွေးကဒ်များ
အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ် - Neteller, Skrill, ecoPayz
အနိမ့်ဆုံးသိုက်သည်ယူရို ၁၀ သို့မဟုတ်ငွေကြေးနှင့်ညီသည်။ အာဂျင်တီးနားပီဆို၊ ဘရာဇီးအစစ်အမှန်၊ ကနေဒါဒေါ်လာ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာ၊ ငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်သို့ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်ချက်ချင်းကစားနိုင်သည်။
Winward ကာစီနိုအသုံးပြုမှုသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လုံးဝလုံခြုံသည်။ ပေးထားသောအချက်အလက်များကို SSL encryption ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တင်ပြသောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မဆိုလက်ျာလက်သို့ကျရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ လောင်းကစားရုံသည်လူသိများသောဘဏ္intermediာရေးကြားဝင်သူများနှင့်သာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်ပုံငွေများကိုလုံလောက်စွာကာကွယ်ထားသည်။
ဝင်းဝါး၏ရိုးသားမှုကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုင်စင်ဖြင့်သက်သေပြသည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသည်ကစားသမား၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လုံခြုံရေးအားအာမခံပေးသည်၊ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အထောက်အထားခိုးယူမှုများနှင့်အခြားလိမ်လည်မှုများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဥပဒေအရလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဤနေရာတွင်လေးစားကြောင်းလည်းသက်သေပြသည်။
ကစားသမားများတွင်မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆိုအဖြေပေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သင်သူမ၏အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကဏ္ section သည်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များစွာပါရှိသည်။
Winward ကာစီနိုသည်အဓိကထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့် BetConstruct, Betsoft Gaming, EGT Interactive၊ Habanero Gaming Systems, Microgaming, NetEnt, Octopus Gaming, Parlay Games, Pragmatic Play, Rival, Visionary iGaming နှင့် Vivo Gaming တို့ကဲ့သို့သောဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Winward အတွက်ဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ၎င်းတို့ကိုဖွင့်ရန်၊ မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုမဆိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့အားလုံးသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာအကြီးဆုံးရွေးချယ်မှု slot ကစက်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာထုတ်ကုန်အသစ်များထည့်သွင်းထားသောကြောင့်အရေအတွက်တိုးများလာနေသည်။ ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်သူ၊ လူကြိုက်များမှု၊ သတင်း (သို့) အက္ခရာစဉ်အလိုက်အလွယ်တကူစီနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုအနိုင်ရရန်ခွင့်ပြုသည့်ဂျက်ထိုးစက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
စစ်မှန်သောကုန်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းကစားနည်းသည် Winward ကာစီနိုတွင်လူကြိုက်များသည်။ ဒီနေရာမှာကမ်းလှမ်းချက်သည်အခြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သည်မဟုတ်။ သို့သော်ကစားသမားပရိတ်သတ်များသည်တကယ့်ကာစီနိုတွင်ကစားနေသကဲ့သို့ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရလိမ့်မည်။ ဤတွင် Blackjack ကိုကစားရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
ကာစီနိုကစားပွဲအားတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီကစားသည်။ ဒါကြောင့်သင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပျော်စရာအချိန်ကိုအချိန်မရွေးပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ် တစ်စုံတစ် ဦး ကတကယ့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာနေဖို့ဘယ်တုန်းကမှအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကအစားထိုးရှာလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤရိယာတွင် Winward သည်တိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိနေသေးသည်။
ယခုအချိန်အထိ Winward Casino ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အထူးမိုဘိုင်း application ကိုတီထွင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် Android စမတ်ဖုန်း၊ အိုင်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများသည်ကာစီနိုကိုဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ အခြားပရိုဂရမ်တခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖုန်းကိုမလိုအပ်ဘဲ ၀ န်ထုပ်စရာမလိုပါ။
Winward တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများအားလုံးသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီသည် display အမျိုးအစားတစ်ခုစီနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်ဗားရှင်းသည်သမားရိုးကျဗားရှင်းနှင့်မတူပါ။ သူ့မှာ Graphic အဆင်အပြင်အတူတူပဲ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်သည်၊ ငွေသွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားစုံကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် Winward ကာစီနိုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားအသစ်များအားလုံးသည်ကြိုဆိုခြင်းအစီအစဉ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်။ ဒါဟာ3ဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်။
၂၀၀၀ အထိပထမ ဦး ဆုံးအပ်ငွေအပိုဆုကြေးဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်ပြီး slot machine ပေါ်တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားများ
၂၅၀၀% ဒုတိယအပ်ငွေအပိုဆုကြေးဒေါ်လာ ၂၅၀၀ အထိအထိငွေပေးချေနိုင်ပြီး slot machine ပေါ်တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားများ။
၃၀၀% တတိယအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေ ၃၀၀၀ အထိယူအက်စ် + ၃၀ slot machines များတွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားများ။
ရန်ပုံငွေများထုတ်ယူခြင်းမပြုမီ၊ ငွေပမာဏအပါအ ၀ င်ငွေပမာဏကို ၃၅ ကြိမ်လောင်းရမည်။ ဤအခြေအနေများကိုဖြည့်ဆည်းရန် ၇ ရက်သာရှိသောကြောင့်သင်မြန်မြန်သွားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကအပိုငွေများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက slot များတွင်အသုံးပြုရန်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၂၅ ခုကိုလည်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အခါအားလျော်စွာသင်သည် Winward Casino တွင်ငွေသွင်းရန်မလိုအပ်သောအပ်ငွေအပိုဆုကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ငွေသွင်းရန်မလိုဘဲသင်၏အပိုဆုကြေးကိုလက်ခံရရှိနိုင်သည်။
ပထမကိစ္စတွင်အနည်းဆုံးငွေပမာဏသည်ယူရို ၅၀၀ သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးနှင့်ညီမျှပြီးယူရို ၂၃ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ option သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးငွေထုတ်ရန်ယူရို ၅၀ (သို့) ငွေကြေးနှင့်ညီမျှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်သို့ရန်ပုံငွေများမရောက်မီကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံယူရမည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ID ကဒ်ပြားသို့မဟုတ်အခြား ID စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးလိပ်စာပါရှိသောလိပ်စာပါသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ရမည်။ သင်ဘဏ်ငွေလွှဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကငွေထုတ်ရန် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိလိုင်စင်များနှင့်တရားဝင်အဆင့်အတန်း - Winward Casino သည်မည်သို့သောပုံစံရှိသနည်း။
Winward သည် Curacao အစိုးရမှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ရှိပြီး၎င်းအခြေခံအားဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂရှိကစားသမားများအား၎င်း၏ဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမပေးပါ။
Дဟုတ်ကဲ့! Winward ၌လောင်းကစားစက်များမှလောင်းကစားသမားအသစ်များအားလုံးသည်အခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်အရေးများရှိပြီးမည်သည့် slot စက်များတွင်မဆိုအခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများကိုစုစုပေါင်းယူရို ၇၅၀၀ + ၁၁၀ အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လောင်းကစားရုံသည်မကြာခဏရံဖန်ရံခါပေးလေ့ရှိသောအခြားအပိုဆုကြေးများကိုလည်းပေးသည်။ ၀ င်းဒိုးကာစီနိုကိုသတင်းများအားလုံးနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ရန်ပုံငွေများထုတ်ယူခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်၏ကစားသမားအကောင့်သို့ ဝင်ရောက်၍ "Withdrwal Request" tab ကိုသွားပြီးသင်စိတ်ဝင်စားသောသင့်လျော်သောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်အပိုဆုအတွက်လောင်းကြေးလိုအပ်ချက်များကိုကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဟုတ်ကဲ့! Winward မှာငါတို့ဟာအခြားတစ်ခြားကုန်သည်တွေနဲ့ကာစီနိုဂိမ်းကစားပွဲကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်ကျယ်ပြန့်မှုမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာတွင်ကစားခြင်း (၆) ခုသာကစားနိုင်ပြီးကစားခြင်းနှင့်ရော့ကက်နှင့် Blackjack တို့ဖြစ်သည်။
Winward ကာစီနိုသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လက်ရှိတွင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်သောအကြီးဆုံးအပိုဆုများထဲမှတစ်ခုကိုပေးသည်။ အနည်းငယ်အတားအဆီးကကုန်သွယ်ရေးအတွက်အပတ်စဉ်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းဂိမ်းအမြောက်အမြားရွေးချယ်ခြင်းသည်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြproblemsနာမရှိသင့်ဟုဆိုလိုသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၌မြန်မာဘာသာစကားဗားရှင်းမရှိသော်လည်းကစားသမားတိုင်းသည်ဤနေရာတွင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်ပါသည်။ ငွေသွင်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးဖော်ပြရန်ထိုက်သည့် Bitcoins ကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်အဆင်ပြေသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုကိုအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကစားသမားများ၏ ဦး စားပေးကိုက်ညီသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်များပြားသောသက်ရှိလောင်းကစားရုံသည်အနည်းငယ်တိုးတက်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ဤလောင်းကစားရုံကိုကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။
Wager လိုအပ်ချက် - x50 (ကန့်သတ်ချက်များ)
ဒါဟာအနှစ် 20 အဘို့အ operating ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်;
ဘာသာစကား 11 ဂွာ;
အပိုဆုသည်တက်ကြွသောအခါ€5၏ wager ကန့်သတ်;
200% မှယူရို 50 နှင့် 200 ကျော်အခမဲ့လှည့်ဖျားခြင်း (0.1 EUR / Spin)
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - 20 ယူရယ်အများဆုံးထုတ်ယူငွေပမာဏ 10 ဆကပ်အပ်ငွေပမာဏ
Support ကိုတစ်ပတ်လျှင် 24 နာရီ, တစ်ပတ်လျှင် 24 နာရီမရရှိနိုင်ပါ;
BONUS BEZ DEPOZYTU 45 EUR ယူ